Taranja mekanika :: Miandrandra fifaninanana efatra ny Federasionan'ny hazakaza-piarakodia • AoRaha
Manantena ny hahatontosa fifaninanana efatra ny Federasiona malagasin’ny hazakaza-piarakodia (FSAM), amin’ity taona 2020 ity, na eo aza ny fisian’ny valanaretina eto amintsika. Akaiky indrindra ny hetsika hokarakarain’ny Team Mika sy Faniry (TMF), amin’ny volana jolay ho avy izao sy ny fifaninanana mitaky hafainganam-pandeha homanin’ny klioba Association Sportive de l’Automobile Club de Madagascar (ASACM), amin’ny volana aogositra 2020.
Samy amin’ny volana novambra 2020 kosa no hanatanterahana ny « Rallye tour de Tana » , izay homanin’ny klioba Asa Tana, sy ny « Rallye International de Madagascar », hokarakarain’ny Federasiona. « Tsy afaka milaza daty raikitra isika aloha satria miankina amin’ny fifehezana ny valanaretina no hahafahana manatanteraka ny fifaninanana na tsia », hoy Rakotofiringa Jimmy, filohan’ny FSAM, omaly. Nohazavainy kosa fa : « voatery nofoanana noho ny fanajana an’ireo fepetra ara-pahasalamana samihafa ny fivorian’ireo mpikambana ao amin’ny FSAM, izay tokony nandinihana ny fanomanana an’ireo lalao rehetra, tamin’ny 25 marsa lasa teo ».
Foana daholo kosa ireo fandaharam-potoan’ny hazakaza-piarakodia tokony natao tamin’ny volana mey sy avrily, toy ny « Rallye du Vakinankaratra » sy ny fifaninanan’ny Firaisana Malagasy Mpanao Spaoro Aotomobila sy Môtô (FMMSAM) ary ny « Slalom ».
Firongatry ny valanaretina Mihanaka tanteraka eto andrenivohitra ny Covid-19
Fitsinjovana mpiasa amin’ny tsy miankina Manohy ny asany any an-trano ireo olona marefo ara-pahasalamana
Firehetana nahafaty :: Lehilahy lehibe sy ankizy roa may kila tao an-trano